Tao anatin’ny 5 volana: tokantrano 58 nangalatra jiron’ny Jirama | NewsMada
Tao anatin’ny 5 volana: tokantrano 58 nangalatra jiron’ny Jirama
Par Taratra sur 02/07/2020
Manamafy ny fitiliana sy fanenjehana ny halatra jiro sy rano ny Jirama. Natsangana ny sampan-draharaha fitantanana manokana hisahana izany ary maro ny efa tratra fa tsy vitsy koa ny mbola manohy izany.
Miteraka fatiantoka goavana ho an’ny Jirama ny fangalaran’ny mpanjifa sasany ny herinaratra na ny rano. Nananganana sampan-draharaha fitantanana manokana ny orinasa, hisahana ny ady amin’ny halatra jiro sy rano. Taorian’izany, nohamafisina ny fitsirihana eto Antananarivo sy any amin’ny faritra. Tao anatin’ny herinandro, tra-tehaka ny tokantrano roa. Teny Marohoho Tsimbazaza ny voalohany, nangalatra rano. Tany Ambohimitsinjo Antsiranana ny faharoa, tokantrano iray nizarazara herinaratra tany amin’ny tokantrano hafa miisa 17.
Niisa 506 ny fitsirihana ny jiro natao, nanomboka ny volana janoary hatramin’ny faran’ny volana mey 2020 teo. Nahatrarana tsy fanarahan-dalana ny 167 tamin’ireo, ka halatra ny 58 ary 109 ny karazana hosoka. Mitentina 282.775.072 Ar ny fatiantoky ny Jirama tamin’ireo.
Ho an’ny rano, miisa 972 ny fitsirihana natao ka nahatratra 362 ny tsy fanarahan-dalàna, izay mitentina 349.191.181 Ar.
Mijanona ho tsiambaratelo
Manentana ny rehetra ny Jirama hampandre raha sendra misy mahita trangana halatra. Misy ny laharana maitso, maimaim-poana, 35 47, na koa mandefa hafatra miafina ao amin’ny pejy facebook, Jirama Ofisialy, na koa manatona ny manam-pahefana. Mijanona ho tsiambaratelo ny fanomezam-baovao sy ny mpanome vaovao.